Madheshvani : The voice of Madhesh - भारतमा बहुमतको सरकार नेपालका लागि अवसर : देवेश झा (अन्तर्वार्ता )
० भारतमा हालै सम्पन्न लोकसभाको निर्वाचनबाट आएको मतपरिणामलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
— भारतको लोकसभा निर्वाचनमा जसरी भारतीय जनता पार्टीले स्पष्ट बहुमत पाएको छ यो अपेक्षित नै हो । यो कुनै नयाँ वा आश्चर्यजनक कुरा होइन । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पछिल्ला पाँच वर्षको भ्रष्टाचारमुक्त र विकासको कार्यकालले गर्दा यही परिणामको अपेक्षा थियो । साथै, विपक्षी दल भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेससँग कुनै मुद्दा नरहेको, कांग्रेसले आधा सिटसम्ममा उम्मेद्वार दिन नसकेको इत्यादि कारणले गर्दा भाजपाको जीत पहिलेदेखि नै सुनिश्चित थियो, यसमा द्विविधापूर्ण अवस्था थिएन । त्यसैले परिणाम पनि त्यही देखिएको छ ।
० भारतमा पुनः नरेन्द्र मोदीकै नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेको छ । भारतको परराष्ट्र नीतिमा केही परिवर्तन हुन्छ कि ?
— यसमा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ कि भारतमा स्पष्ट परराष्ट्र नीति छ । भारतमा परराष्ट्र नीति बनाउँदा प्रायःजसो सर्वपक्षीय सबै राजनीतिक दलको सहमति र समर्थनमा एउटा ठोस र दूरगामी नीति निर्धारण गरेर अगाडि बढ्ने चलन रहँदै आएको छ । त्यसैले मोदीको यो कार्यकालमा भारतको परराष्ट्र नीतिमा कुनै परिवर्तन हुने सम्भावना छैन ।
० यो दोस्रो कार्यकालका लागि मोदीका सामु के–कस्ता चुनौती देख्नुहुन्छ ?
— मोदीले आफ्ना संकल्पहरू पहिलो कार्यकालमै पूरा गरिसकेका छन् । हिजो मोदीले आफ्ना कार्यकर्तालाई पार्टी मुख्यालय दिल्लीमा सम्बोधन गर्दा दुईटा विषयमा प्रष्टरूपमा आफ्ना कुरा राखेका छन्, जसबाट उनको आगामी कार्यक्रम र दिशा बुझ्न सकिन्छ । उनले भारतमा अब दुईटा जाती मात्र रहेको विश्लेषण गरेका छन् । एउटा गरिबीबाट आफूलाई बाहिर निकाल्ने जाति र अर्को ती गरीबलाई बाहिर निस्किन सहयोग गर्ने जाती । भनेपछि आउने दिनमा जातीय वा धार्मिक आधारमा प्राप्त भएको सुविधाहरूमा संशोधन हुनसक्छ । सम्भवतः आर्थिक आधारमा त्यस प्रकारका सुविधाहरू राज्यबाट प्राप्त हुनेछ । अर्को कुरा, अब भारतले विश्व महाशक्ति र विशाल अर्थतन्त्र भएको राष्ट्रको रूपमा आफूलाई उभ्याउनका लागि वर्तमान विश्व अर्थतन्त्रमा अमेरिका र चीनबीच जुन द्वन्द्वको अवस्था छ, त्यस बीचमा मोदीले कुन प्रकारले भारतलाई स्थापित गराउँछ त्यो एउटा चुनौतीको रूपमा आउनेछ ।
० भारतको निर्वाचनबाट नेपालमा कस्तो प्रभाव परेको पाउनुभएको छ ?
— भारतको चुनावका विषयमा नेपालमा धेरै गन्थनमन्थन भएका छन् । त्यसको खास कारण के छ भने यहाँ आत्मरत्ति गर्ने चलन बढी छ । जस्तै, यहाँबाट कन्हैया कुमारको चुनाव प्रचारप्रसार गर्न केही राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरू पुगिसकेका थिए । अर्को राष्ट्रमा भइरहेको चुनावमा गएर प्रचार गर्नु कतिसम्म युक्तिसंगत थियो ? तथापि गए । कोही शत्रुधन सिन्हाको प्रचार गर्न पटना पुगे । आफ्नै गतिविधिले आफै भ्यातुर भइरहेको अवस्था छन्, त्रसित भएको अवस्थामा छन् । कतिपयले त अनाहकमा मनको लड्डू घ्यूसँग खाइरहेका छन् । भारतमा हिन्दू राष्ट्रका पक्षधर शक्ति पुनः सत्तामा आउँदैमा नेपालमा पनि सोही अनुरूपको चमत्कार हुन्छ भनेर भ्रम पाल्नेहरू पनि छन् यहाँ । न त नेपालमा कुनै वितण्डा हुनेवाला छ न त कुनै चमत्कार हुनेवाला छ । महत्वपूर्ण कुरा के छ भने नेपालमा पनि अहिले दुई तिहाईको महत्वपूर्ण सरकार छ र संयोगवश मोदीको नेतृत्वमा प्रचण्ड बहुमतसहित दुई तिहाइको स्थिर सरकार बनेको छ । यो ठूलो स्वर्ण अवसर हो नेपालका लागि । नेपालले यसलाई कसरी सदुपयोग गर्न सक्छ, त्यो त नेपालको हातमा छ ।
० यसलाई नेपालले कसरी सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ ?
— मैले बुझेअनुसार सन् २०१४ को निर्वाचनमा मोदीको नेतृत्वमा त्यतिबेला पनि भाजपाको गठबन्धनमा रहेको एनडीए दुई तिहाईभन्दा बढी सिट प्राप्त गरेको थियो । त्यतिबेला शपथ ग्रहण समारोहमा सार्क राष्ट्रका प्रमुखहरूलाई निम्त्याइएको थियो । यसपटक विमस्टेक राष्ट्रका सरकार प्रमुखहरूलाई निम्त्याइएको छ । अब स्पष्टरूपमा बुझ्न सकिन्छ कि सार्कबाट भारतको ध्यान बिमस्टेकतर्फ सरेको छ । नेपाल दुवैको सदस्य राष्ट्र हो र गत वर्ष नै नेपालमा चौथो बिमस्टेक शिखर सम्मेलन भएको छ । नेपालले बिमस्टेकलाई भरपूर रूपमा उपयोग गरेर आफ्नो आर्थिक गतिविधि बढाउने काम गर्नु पर्छ । नेपालको हित पुग्ने गरी बिमस्टेक राष्ट्रहरूमा विद्युत प्रसारण लाइन जोड्ने एउटा महायोजना प्रस्ताव पारित भएको छ । नेपालले त्यो योजना कार्यान्वयन गराउन सक्यो भने भविष्यमा नेपाल आफ्नो विद्युतको बजार बढाउन सक्छ । यो सहज पनि छ । किनभने नेपालमा पनि दुई तिहाईको सरकार छ र भारतमा पनि दुई तिहाइभन्दा बढीको सरकार छ । यो लाभ लिन सक्ने ठाउँ त छ तर त्यसलाई सदुपयोग गर्न सक्ने वा नसक्ने आफ्नै हातमा छ ।
० भारतमा जसरी कांग्रेसको पराजय भएको छ, त्यसरी नै नेपालमा पनि नेपाली कांग्रेसले पराजय भोगेको छ । यसले के संकेत गर्दैछ त ?
— नेपाली कांग्रेस आफ्नो मुद्दाबाट विचलित भएको अवस्थामा छ । आजको मितिमा नेपाली कांग्रेसको अब कुनै सिद्धान्त छैन । नेपाली कांग्रेसको एजेन्डा बहुदल थियो, त्यो पूरा भइसकेको छ । प्रजातन्त्र थियो, प्रजातन्त्रबाट अगाडि बढेर नेपाल गणतन्त्रमा गइसकेको छ । स्थापना कालमा कांग्रेसले संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रको दुई खण्डे नीति लिएको थियो । त्यो गणतान्त्रिक नेपालमा प्रवेश गरेको छ । जुन माओवादीको एजेन्डा थियो । त्यसको लाभ नेपाली कांग्रेसले पाउने कुनै कारण बाँकी देखिँदैन । नेपाली कांग्रेस एउटा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पहिचान भएको हुँदाहुँदै पनि आज आफ्नो सिद्धान्त अथवा कार्यक्रममा कहीं पनि देखा परेको छैन । किनभने नेपाली कांग्रेसँग कुनै कार्यक्रम नै भएन । प्रष्टरूपमा के देखिन्छ भने विचारहीनता र सिद्धान्तहीनताको अवस्थामा पुगेपछि कुन एजेन्डामा कांग्रेसले आफ्नो बहस र कार्यक्रम अगाडि बढाउने त्यसको दिशा स्पष्ट छैन । त्यसकारणले नेपाली कांग्रेस आज यो दुर्दशामा पुगेको छ ।
० भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसको पराजयका कारणहरू के–के औंल्याउनुहुन्छ ?
— भारतमा भारतीय जनता पार्टी र भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसको बीचमा प्रमुखरूपमा दुई÷तीनटा कुरामा अन्तरभिन्नता छ । भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस परिवारवादबाट सञ्चालित छ भने भाजमा कुनै पनि नेतालाई एउटा निश्चित उमेरपछि अवकाशमा जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था राखिएको छ । अर्थात् कुनै पनि नेता नेतृत्वमा सदाका लागि रहने छैन । मोदीजी पनि सम्भवतः आगामी निर्वाचनमा भाग लिनु हुन्न । भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसको अवस्था के छ भने नेहरू गान्धी परिवारको विरासतको रूपमा पार्टी सञ्चालन भएको छ । हामीले यही चुनावमा देख्यौं, रातारात प्रियंका बाड्रालाई सोझै राष्ट्रिय महासचिवमा मनोनयन गरियो । सोनिया गान्धीको छोरीबाहेक भारतीय राजनीतिमा उहाँको केही योगदान छैन ।
दोस्रो अर्थतन्त्रको कुरा । मनमोहन सिंहको प्रवेशपछि भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसले उदार पुँजीवादी अर्थतन्त्रमा आफूलाई अगाडि बढायो । त्योभन्दा पहिले समाजवादी अर्थतन्त्रमा चल्ने गर्दथ्यो । भारतीय जनता पार्टीले राष्ट्रवादी अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाएको छ । आज भारतमा राष्ट्रवादी अर्थतन्त्रको पक्षमा माहोल बनेको छ । नेपालमा जसरी नेपाली कांग्रेस विचार शून्यतामा पुगेको छ, लगभग भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसको पनि त्यही अवस्था छ । यसपटकको भारतको निर्वाचनमा मोदीलाई गालीगलौज गर्ने, चौकीदार चोर है भन्ने जस्ता कुरा बाहेक भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसका नेतृत्वको तर्फबाट कुनै पनि प्रकारको राजनीतिक विचार आएन । त्यतिमात्र होइन, भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसको सरकार बनेपछि उसको कार्यक्रम के हुन्छ भनेर बारम्बार इन्टिलेक्चुअल प्लेटफर्ममा बहस गर्न खोज्दा पनि दिन सकिएन । यही तालमा गइरहने हो भने भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसको सट्टामा क्षेत्रीय पार्टीहरूको एउटा महागठबन्धन तयार हुन्छ, जसले पछि गएर एउटा नयाँ स्वरूप निर्माण गर्नेछ ।
० भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस र नेपाली कांग्रेसलाई कसरी तुलना गर्न सकिन्छ ?
— नेपाली कांग्रेसमा पनि त परिवारवाद हावी भएको थियो । नेपाली कांग्रेस एउटा स्वच्छ छविको रूपमा प्रवेश गरेको थियो तर २०४६ सालको सत्ता परिवर्तनपछि त्यतिबेला सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई, लौहपुरूष गणेशमान सिंह जस्ता दिग्गज नेताहरूको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेसले आन्दोलन गरेर निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्थालाई परास्त गरेर बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाको प्रादुर्भाव पुनः गरायो । तर, त्यसपछि कोइराला परिवारको हालीमुहाली चलिरह्यो । त्यसपछि नेपाली कांग्रेसका नेताहरू एकपछि अर्को गरी भ्रष्टाचारमा बदनाम हुँदै गए । नेपालमा भ्रष्टाचारको संस्थागत प्रवेश गराउने आरोप त नेपाली कांग्रेसमाथि नै लागेको छ ।
० मोदीको विगत पाँच वर्षे कार्यकालमा नेपाल–भारत सम्बन्ध सबभन्दा बढी उचाइमा पुगेको विश्लेषण गरिँदैछ । अबको आगामी कार्यकालमा सम्बन्ध कस्तो रहला ?
— केही दिन पहिला नेपालका केही पत्रकारहरूको टोली भारत भ्रमणमा गएका थिए । ती टोलीसँग भएको अन्तरक्रियामा भारतका विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजले नेपाल–भारतको सम्बन्ध अहिले उच्चतम् बिन्दुमा पुगेको भन्ने कुरा स्पष्टरूपमा व्याख्या गरिएको हो । यसपटकको निर्वाचनमा मोदीको जीतपछि नेपालका प्रायः सबै प्रमुख नेताहरूले बधाई ज्ञापन गरेका छन् । जसको जवाफ नरेन्द्र मोदीले ट्वीटरमार्फत् हरेक नेतालाई व्यक्तिगत रूपमा फर्काएर नेपाल र भारत परस्पर छिमेकी मित्र राष्ट्र हो बताएका छन् । आउने दिनमा हामी दुई राष्ट्र मिलेर एकअर्काको समृद्धिका लागि सक्दो प्रयास गरेर अगाडि छौं भन्ने कुरामा विश्वस्त रहेको कुरा स्पष्टरूपमा मोदीले व्यक्त गरे । त्यसैले कुनै द्विविधा गर्नुपर्ने अवस्था छैन । नेपाल–भारतको सम्बन्ध अत्यन्त सुमधुर ठाउँमा पुगेको छ र यो गतिशील छ ।